Wadahadalkii dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland oo burburay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wadahadalkii la doonayey inuu shalay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga uga furmo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ayaa lagu kala tegay, iyadoo aan la isisoo hor fariisan.
Sababta burubrka wadahadalka ayaa aheyd maamulka Somaliland oo shuruud ku xiray xubnaha wafdiga dowladda Soomaaliya matalaya.
Maamulka Somaliland ayaa dalbaday in liiska wafdiga Soomaaliya laga saaro ilaa 4 xubnood oo ay sheegeen iney kasoo jeedaan dhanka Somaliland, balse ka mid ah dowladda Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maamulka Somaliland ku eedeynaysa inay mas’uul ka tahay burburka wadahadallada kadib markii ay Somaliland ku adkaysatay inaysan la fadhiisanayn xubnaha ka soo jeeda Somaliland ee ku jira ergada Federaalka.
Labada wafdi ayaa weli ku sugan dalka Turkiga, lamana oga in xal la heli doono iyo inkale.